Akhriso: Golaha Wasiirada DDS oo War-saxaafadeed kasoo saaray soo rogaal celinta TPLF – Idil News
Akhriso: Golaha Wasiirada DDS oo War-saxaafadeed kasoo saaray soo rogaal celinta TPLF
War-saxaafadeed kasoo baxay Golaha Wasiiradda Dowlad deegaanka Soomaaliya ayaa looga hadlay xaalada dalka Itoobiya, iyo dib u soo noqoshada Awooda xoogaga Tigreega oo deegaan cusub kala wareegay Ciidammada DF Itoobiya ee uu hoggaamiyo Abiy Ahmed Ali.
Saddexdii sano ee la soo dhaafay isbaddalkii kaddib dowladda Deegaanka Soomaalida iyo hoggaaminteeda oo isku duuban waxa ay xoogga saartay in shacabka Soomaliyeed laga dulqaado dhibaatadii ay muddada soddonkaa sano ah u gaysatay, waxaana la sameeyay jihooyin kala duwan oo lagu badbaadinayay shacabka Soomaliyeed.
Muddadaasi saddexda sano ah waxaa la qaaday jid walba oo ummadda Soomaaliyeed lagaga samata bixin karo hadimooyinkii baaxadda lahaa ee ay TPLF shacabka u geysatay. Waxaana lagu guuleystay in laga soo gudbo talooyinkii ay janaraaladdii TPLF talisyadooda uga soo go’aamin jireen iyo argagixii shacabka la galin jiray.
Ugu dambayn, Dowladda Deegaanka Soomaalida waxa uu waajib ka saaran yahay nabadda iyo horumarka shacab-weynaha Soomaalida, waxa ayna dowladdu caddaynaysaa in ayna imaan doonin gacan shisheeye, lana ogolaan doonin”.